ဦးပိန်တံတား ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် တိုင်လုံးတချို့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် အပြီး လဲလှယ်သွားမည် - Yangon Media Group
ဦးပိန်တံတား ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် တိုင်လုံးတချို့ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် အပြီး လဲလှယ်သွားမည်
အမရပူရ၊ မတ် ၁၅
မန္တလေးမြို့ အမရပူရမြို့နယ် တောင်သမန် အင်းအတွင်းရှိ နှစ်ပေါင်း ၁၆ဝ ကျော်သက်တမ်းရှိ ကမ္ဘာကျော်ဦးပိန်တံတားကြီး ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက် ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန(မန္တလေးဌာနခွဲ)၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းနေသည့် တိုင်လုံးတချို့ကို ရှေးမူမပျက်စေဘဲ လဲ လှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို သင်္ကြန်ကာလမတိုင်ခင်ပြီးစီးရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”တံတားကြီးမှာ တိုင်လုံးစုစုပေါင်း ၁ဝဝဝ ကျော်ရှိရာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရာသီဥတုဒဏ်ခံလာရတာနဲ့သက်တမ်းကြာမြင့်မှုကြောင့် တံတားကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ တိုင်လုံး ၃ဝ ကျော်ဟာ ဆွေးမြည့်နေတာကို တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် လဲလှယ်ဖို့ စီစဉ်ရတာပါ။ သင်္ကြန်ကာလမတိုင်ခင် ဧပြီလဆန်းပိုင်းလောက်မှာ တော့ လုပ်ငန်းအားလုံးပြီးစီးဖို့ လျာထားပါတယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သင်္ကြန်ရက်အတွင်းမှာ လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွား အရေအတွက်က အလွန်များပြားသလို တံတားကြီးပေါ်မှာက လူအပြည့်ရှိတာဆိုတော့ ခရီးသွားတွေထိခိုက်အန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့နဲ့ တံတားကြီးရဲ့သက်တမ်းရှည်ကြာဖို့အတွက် တခြားပြုပြင်ဖို့ လိုအပ် နေသေးတဲ့နေရာတွေကိုလည်း အသေးစိတ်စစ်ဆေးလုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဦးပိန်တံတားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးစိုးဝင်း(ငှက်လှေအသင်း)က မတ် ၁၅ ရက် တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
ဇရပ်အမှတ်(၃)မှာ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြည့်မှုများဖြစ်ပေါ်သဖြင့် အလှူရှင်များလှူဒါန်းငွေကျပ်သိန်း ၉ဝဖြင့် မူလပုံစံအတိုင်း ပြန်လည် ပြုပြင်တပ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက် ရှေးဟောင်းဌာနသို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံထားကြောင်း အဆိုပါ ဇရပ်သည် တံတားအလယ်ဖြစ်၍ လေတိုက် မှုဒဏ်ကို အများဆုံးခံရသဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက မြန်မာမှုဗိသုကာ ပညာရှင်များက အကြံပြုရေးဆွဲထားသည့် ပုံစံအတိုင်းသာ ရှေးမူ မပျက်တပ်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်များ လာရောက်လည်ပတ်မှုမှာ တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံးအယောက် ၃ဝဝ ရှိ၍ တချို့လများတွင် တစ်ရက်လျှင် အယောက် ၈ဝဝ ကျော်ရှိရာ တောင်သမန်အင်းအတွင်း ငှက်လှေစီးခြင်းနှင့် နေဝင်ဆည်းဆာအလှကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရိုက်ခြင်းတို့ကို နှစ်သက်သဘောကျကြကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပေးမည့် တံတားစီမံကိန်းနှင့် မလွတ်ကင်းသည့် အဆောက်အအုံနှင်?
ခါးပတ်လည်း ပတ်စေ နားကြပ်လည်း တပ်စေ
ထိုင်းတွင် တရားမဝင် နိုင်ငံခြား လုပ်သား ဖမ်းဆီးမှု ပြန်လည်စတင် ဖမ်းမိမြန်မာများကို ပြန်လွှဲ??
‘အဖေ့ရဲ့ တတ်တဲ့ပညာနဲ့ သမီးကို ပညာတတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင် သမီး တတ်တဲ့ပညာနဲ့လ??